Tiisa daryeela tu kale ku dara” waa talo ku socota qolyaha qof kale is mooda. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Tiisa daryeela tu kale ku dara” waa talo ku socota qolyaha qof...
Tiisa daryeela tu kale ku dara” waa talo ku socota qolyaha qof kale is mooda.
Qofka aqoonta leh ee fahmadda iyo xikmadda uu Alle siiyay waxa uu garanayaa labo isku derajo ama isku shaqo ahi haddana in duruufuhu kala duwaan oo aanay isku camal iyo qoraal toonna noqon.
Macanaha, haddii aad sheekh tahay, aqoonyahan kale tahay, amaba ganacsade waxa ku hagaya oo awliyaadkaaga qeexaya waa duruufta kugu xeeran.
Tusaale ahaan, haddii aad bare jaamacadeed tahay, Geeddi oo saaxiibkaa ahina uu ku la mid yahay kadibna aad deegaannadiinnii ku kala noqotaan oo isagu uu u tago nidaam waxbarasho iyo jaamacad diyaar ah waxa ay shaqadiisu noqonaysaa in uu bariddii bilaabo iyo horumarintii nidaamkaas.
Haddii inta aad deegaankaagi tagto aad aragto inaanay ka jirin jaamacadi adiga shaqadaadu waxay noqonaysaa sidii aad ku samayn lahayd jaamacad. Duruufta iyo waayaha ayaa shaqada iyo waajibaadka idiin kala duway.
Haddaad caalim tahay As-har ka soo baxay oo Aw Jaamac aad mar soo wada baxdeen waxa idin kala duwi doonaa waa duruufta aad la kulantaan.
Waxa aan uga socdaa: aqoonyahanka iyo qoraaga Laascaanood masuuliyadda saran iyo ta ka reer Hargeysa saarani way kala duwan yihiin.
Sidoo kale, lahjadda (Tone) ay ku hadlyaan iyo qaabka ay wax u cabirayaan ayaa xitaa kala duwanaanaya. Inaad tororogleyso ama sidii nin dhulkiisu bed qabo wax u qorto oo kor kaxaadiska aad badiso amaba aad sidii nin maamul leh is dhigato oo waxyaabo aan macno badan dadkaaga maanta u samaynayn aad ku fooganaato, ogow aqoonta aad sheegaysaa ku ma ay anficin oo xikmaddii ayaa lagaa qaadaye.
Haddii aan sheikh ama qoraa reer Hargeysa ama reer Garoowe ah ahaan lahaa waxaan ka warrami lahaa taqwada, waraca, iyo jannada. Waxa aan ka digi lahaa musuqa. Waxa aan wax ka sixi lahaa waxbarashada, caafimaadka iyo maamulka. Marmarna waan iska faakihaysan lahaa. Laakiin reer Laascaanood baan ahay ee ha iga filin inaan u hadlo sidii qof Hargeysa jooga.
WQ. Cabadicasiis M. Jamac
Previous articleQiimayn (Evaluation) & Baadhid (Investigation) 57 bog ah ma lagu beenin karaa hal xaashi oo tabcaan ah.
Next articleJovenel Moïse, madaxweynihii dalka Hayti. Oo habeen hore saqdii dhexe qudha laga jaray.
1960-yadii Afgaanistaan waxay ahayd mid aad uga duwan sida ay maanta tahay. U fiirso sida ay Afghanistan ahayd – iyo sida ay mar kale...